Ny fitsangatsanganana bakalorea sy ny bakalorea dia fotoana lehibe ahafahana mandeha amin'ny dia iray, andramo zava-baovao ary tapaho ny làlana manaitaitra. Maninona raha manao an-dahatsoratra izany ary mandehandeha fotsiny amin'ny fandanjalanjana? Glamping dia safidy mahavariana ho an'ny fitsangatsanganana an-tsaina sy fitsangatsanganana bachelorette. Ny tanànan'i Frantsa dia toerana mahafinaritra harahina amin'ny zorika mavokely miezinezina marefo amin'ny tanimbary frantsay izay mahafinaritra anao indrindra..
Te-hametaka ny bilaoginay “7 Bachelor And Bachelorette tsara indrindra any Europe” ianao ao amin'ny tranonkalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-bachelor-bachelorette-trips-europe/ ‎– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)